Maitiro Emabhizinesi mu140 Vatambi kana Zvishoma Martech Zone
Twitter yatangazve yavo Bhizinesi nzvimbo uye akawedzera vhidhiyo nyowani, inonakidza. Ini ndinoda mameseji uye grafiki dhizaini - iyo inopenda yakajeka yakajeka ye Twitter uye mashandisiro emabhizimusi ekushandisa chishandiso mune chaiyo-nguva yekutsvaga, kupindura uye kusimudzira bhizinesi ravo.
Iwo mabhesiki anosanganisira kubatana nevanhu chaivo, tsvaga zvakawanda nezvekuti ndiani ari paTwitter uye maitiro ekuvasvikira, nzwisisa mhedzisiro yako analytics, sanganisa kuedza kwako kwekushambadzira neTwitter mabhatani uye maTweets akaiswa mukati, simbisa yako kuyedza kuwedzera yako maitiro
uye uwane mhedzisiro nehunyanzvi hwekubudirira matekiniki nemaqhinga.
Twitter inonyora akati wandei matipi emabhizinesi kutora yavo Twitter zano kumusoro notch:
Makwikwi & sweepstakes - Vateveri vanonanga, ita kuti vafarire, vabatanidze mumakwikwi kwavanodzokorora uye kuwedzera kusvika kwevateereri vako.
Mhinduro yakananga - Shandisa akakwidziridzwa maakaunzi akananga kune akasarudzika vateereri uye akajairirwa kune yakatarwa regiona kukura kwako kunotevera. Pindura uye batsira yako iri kukura inotevera.
Dzoka kuti kiinura - Vateveri vanoparadzira iwo meseji nekudzokorora zvakare kupihwa uye, mushure meimwe nhamba yeRetweets, vakapihwa mubairo nekutapudza.
ushamwari - Joinha mauto ane vanokurudzira kuti vawedzere meseji yako uye upe yakasarudzika kufona kune chiito
Chigadzirwa kuvhura - Shandisa Akasimudzira Maakaundi kukwezva vateveri vatsva uye mubatanidzwa weAkasimudzira maTweets uye Akasimudzira Maitiro kuita vateveri vanofarira.
Twixclusive - Vhura zuva rimwe chete rekutengesa flash chete paTwitter. Simbisa icho nekubatana nechikonzero uko chikamu chemari chinopihwa.
Shandisa zviitiko kuita - Zvemukati meTwitter uye chirongwa chechikwata chinogona kugadzira zviitiko zvakagadziriswa kusimudzira chiitiko chako.
Tags: kukurudzirwa tweetsvakasimudzira vashandisiTwittertwitter kushambadziratwitter zviitikoTwitter Kushambadziratwitter kushambadzira matekinikitwitter yakasimudzira ma tweetstwitter mazanotwitter maitiro
Gadzira Rakareruka Twitter Campaign ine IFTTT